A na-eme "Mermaid" ajuju dị ka ọkara ọkara ya na ọdụ ụbụrụ. Echiche nke ịmepụta ihe dị iche iche dị iche iche bụ nke onye mmebe Melanie Campbell. Ngwurugwu ihe eji eme ihe a ga-eme ka ị na-enwe mmetụta dịka akụkọ ọdịnala, ma ụmụaka ma okenye.
Site n'enyemaka nke ajuju "Nwanyị" ajụjụ banyere otú o si dị mma iji kechie ya, edozi ya n'onwe ya. Iji mee nke a, o zuru ezu iji dabara na cocoon nke a, nke nwere ike ịrụ ọrụ ọrụ ọkụ dịka o kwere mee.
Akụrụngwa na-eme ka ọ bụrụ ọdịda n'ụdị ọdụ nwanyị
mahra (microfiber ọkwa);
A na-ejikọta na yarn na-ejikọta ya na nko . Ikike nke ihe a na-enye gị ohere ịsacha ngwaahịa ahụ na igwe ime.
Egwu ndị dị na acrylic nwere nnukwu ọnụ ahịa.
Nhọrọ ndị ọzọ bụ ngwaahịa nke ajị anụ ma ọ bụ mahry. Ha na-anọchite anya nhọrọ ọzọ nke mmefu ego.
Size nke mkpọchi "Mermaid's Ugwu"
Ihe a na-ekwu na "Mermaid" nwere ike ịbụ nke atọ, gbakọọ:
maka ụmụaka - 86x68.5 cm;
na-eto eto - 110x89 cm;
maka ndị okenye - 129.5x89 cm.
Ịzụta ihe ndị dị na ntanetị nwere ike ịnweta site na Ịntanetị, na ụlọ ahịa ebe a na-ere ihe onwunwe aka. Ha na-adọrọ mmasị na ha rere ha n'obere, ma nke a ga-enye gị ohere ịnwe ihe pụrụ iche ị na-esetịghị izute ndị enyi ma ọ bụ ndị agbata obi gị. Ị nwere ike ịzụta ihe agwụla ma ọ bụ mee ka onye ọ bụla nyere gị iwu, nke mere na ọ bụ aka mejupụtara "Mkpụrụ obi" ahụ dịka ọchịchọ gị si dị.
"Ụgha nke Nwa Nwanyị ahụ" ga-eme ka ị na-ekpo ọkụ n'oge oyi na-atụ, banye n'ime igwe magburu onwe ya ma ghọọ ezigbo ihe mmebe nke ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ gị.
"Mkpịsị ntụzị" maka motoblock
Kedu otu esi eme ka mma bemiiki di nma?
Cartridge maka igwekota
Ngwunye Ultraviolet maka akpụkpọ ụkwụ
Rag maka ime windo
Ndị nkedo maka ogige na ogige
Kedu esi ejikọta nyocha nke abụọ na kọmputa?
Nchekwa mmiri ọkụ ọkụ
Akara site na GKL
Kedu esi esi esi nri cutlets?
Agba chaa chaa - nke kachasị ejiji na nke di na nwunye
Inweghi onwe onye
Kedu esi eme oche?
Nkume ntutu ntutu anya - ihe niile ị chọrọ ịma banyere usoro ahụ
Gịnị bara uru maka strawberries ọhịa?
Ngbapu ogbugba mmiri n'ime griin ha
Ọkpụkpụ ejiji 2013
Ọ dị njọ ịṅụ mmiri dị ukwuu?
Kedu ihe na-atọ ụtọ ka esi esi nri?
Ọrụ nke di n'ime ezinụlọ
Nina Dobrev na Scott Eastwood
Mbụ si anyanwụ